Pompeo oo sheegay Ilaahey inuu Trump uu u soo diray Israa'iil si uu Iiraan uga badbaadiyo - BBC News Somali
Pompeo oo sheegay Ilaahey inuu Trump uu u soo diray Israa'iil si uu Iiraan uga badbaadiyo
Image caption Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompe ayaa sheegay "iney suuragal tahay" Madaxweyne Trump inuu madaxweyne ka noqdo Mareykanka uu ilaahey ugu tala galay inuu Israa'iil kaga badbaadiyo Iiraan.
Pompeo oo wareysi la yeeshay shabakadda Christian Broadcasting xilli uu booqasha ku marayo Israa'iil ayaa sheegay inuu diinta uu aaminsan yahay ay ka keentay inuu sidaasi aamino.
Xiisadda Mareykanka iyo Iiraan oo saameysay Ciraaq
Mr Pompeo ma aha mas'uulki ugu horreeyey oo ka tirsan maamulka Trump oo hadal noocaasi ku hadla. Bishi January xoghayaha arrimaha saxaafadda aqalka cad Sara Sanders waxay warbaahinta dad kirishtaanka leeyihiin u sheegtay "inuu ilaahey doonay inuu Trump uu madaxweyne noqdo".
Jimcahanna maamulka Trump wuxuu cunaqabateyn saaray 14 qof oo Iiraan ka soo jeeda iyo 17 hay'adood oo xiriir la leh barnaamijka Niyuukilarka iiraan.